ဘာကြောင့်အမေရိကန်ကဘောလုံးကိုဘယ်တော့မှတန်ဖိုးမထားဘူး | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 23, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီတစ်ခုအတွက် Matt ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဝိုး။
Yahoo! 52451930 ဆိုတာဘာလဲ?
ဧပြီ 24, 2007 မှာ 12: 33 AM
ဒါဟာတကယ်တော့ဒတ်ခ်ျအမေရိကန် Idol တစ်ဝက်အကြာပြသခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်၊ မင်္ဂလာပါ
ဧပြီ 24, 2007 မှာ 2: 56 AM
ဗြိတိန်တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကြိုးစားခဲ့လျှင်အစေးကျူးကျော်မှုနှင့်အဆိုတော်များသည်အပြေးသမားတစ် ဦး အားပြုရပေမည်။
ဧပြီ 24, 2007 မှာ 9: 00 AM
ဒါကကြောက်မက်ဘွယ် freaking ခဲ့သည် !!!
ဧပြီ 24, 2007 မှာ 11: 34 AM